Hal xeeladood oo lagu kordhinayo nolosha batteriga ayaa noqotay been abuur. | Androidsis
Zack | | Batariga, Noticias, Qalabka kale, Khiyaamada Android, Tababarada
Mid ka mid ah waxyaabaha sida weyn noo khuseeya maadaama aan isticmaaleyno Android waa nolosha batteriga. Waxaan wax ka badalnaa xulashooyinka, ku rakibnaa codsiyada, sameynnaa kun xirfadood illaa inta aan guuleysaneyno saacadood daqiiqadaha nolosha ee taleefannada casriga ah ee aan jecel nahay.
Laakiin maahan in dhammaan "tabaha" ama talooyinka lagu kordhinayo nolosha batteriga ay run yihiin, inbadan oo ka mid ahna waa been abuur., sida kan aan uga hadli doono maqaalkan.
Waxaa lagugula talinayaa haddii aad tirtirto macluumaadka batteriga (Wipe Battery Stats), muddadiisa waa la kordhiyaa. Tani waxay ka timid aaminaadda haddii aadan lacag ka qaadin taleefankaaga casriga ah 100%, macluumaadka ayaa lagu kaydiyaa feyl, lacagta ay leedahay waa inta ugu badan ee batteriga laga qaado.
Tan waxaa lagu magacaabaa saameynta xusuusta.. Si aan u caddeeyo, waxaan ku siinayaa tusaale: ka soo qaad in aad lacag ka qaadatid Taleefankaaga casriga ah oo aad ka jareyso 92%. Maxay saameynta xusuusta sameysaa waxay u sheegtaa taleefanka in 92% ay tahay tan ugu badan ee batteriga uu qaadi doono, taasoo ah been maadaama ay wali 8% ka hartay bilaa lacag. Waxaa loo maleynayaa in lagu yiri internetka in saameynta xusuusta ay ku keydsan tahay fayl ku jira Android-keena.
Laakiin waad nasan kartaa, tan iyo baytariyada hadda jira si dhib ah uma saameeyaan saameynta xusuusta, marka waa la muujiyay in tani been abuur tahay.
Xitaa sidaas, Dianne Hackborn, injineerka Google, wuxuu ku xaqiijiyay been abuurkan akoonkiisa Google+:
Tilmaamaha baytariga ee ku jira baarka ogeysiinta ayaa muujinaya waxa ku jira faylka batterystats.bin.
Faylkani wuxuu keydiyaa isticmaalka batteriga ee barnaamijyada iyo howlaha Android.
Markaa haddii goob fagaare ah, ama aad ku aragto internetka inay kugula talinayaan in la tirtiro waxa ku jira faylkan iyo in batteriga uu kordho, waxaad kaga jawaabi kartaa inay been tahay :-).
Nota: ROMS-ka la kariyey waxaa sidoo kale lagugula talinayaa inaad tirtirto feylkaan, laakiin maaha inaad badiso batterigiisa, laakiin si ROM-ka uu sifiican ugula jaanqaado batteriga oo markaad aragto boqolkiiba batteriga uu sax yahay
source: Google+ ee Dianne Hackborn
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Batariga » Xeelad si loo kordhiyo nolosha batteriga ayaa u noqotay been abuur
geek android dijo
Bakteeriyada? Waxay ila tahay inaad khaldantay ... 🙂
Ku jawaab androidfriki
Waa inaad aragto waxa xaraf fudud isbeddelayo. Waad ku mahadsantahay digniinta :-).
Alfredo Soro dijo
In kasta oo ay run tahay in baytariyada lithium ay ka maqan tahay saamaynta xusuusta, haddana waxay u nugul yahiin inay lumiyaan waxtarkooda haddii loogu isticmaalo lacag aad u hooseysa. Taasi waa sababta laguugula talinayo inaad dib u buuxiso hadday ka hooseeyaan 30 ama 20% tusaale ahaan. Waana ka fiican tahay in la damiyo moobilka halkii laga oggolaan lahaa inuu ka hoos shaqeeyo xadkaas. In kasta oo aaladaha hadda jira ay leeyihiin difaac dheeraad ah, haddana uma fiicna baytariga inuu uga tago iyaga oo amraya dhowr maalmood.
Jawaab Alfredo Soro
Laakiin tani waxay noqon doontaa jiidis, iyadoo taleefannada casriga ah maanta ay aad u dhakhso badan tahay in la gaaro 20% iyo xitaa ka sii badan oo ah 30%, haddii aan sidan yeelno, waxaan kaliya u isticmaali lahayn taleefanka nus-maalin !!!!
Ku jawaab CharlesV32
ivkoto ™ dijo
Oo xaggee la qabtaa?
Jawaab ivkoto ™
Maaddaama ay ku qoran tahay maqaalka: «Waxaa lagugula talinayaa haddii aad tirtirto macluumaadka batteriga (Wipe Battery Stats), muddadiisa waa la kordhiyaa.»
Taasi waa, xeeladdu waa in la masaxo waxa ku jira faylka keydinaya macluumaadka batteriga oo uu sii dheeraanayo.
Taas oo sida maqaalkeygu sheegay aan run aheyn.
Waxaan kugula talinayaa Difaaca Casiirka iyadoo lala kaashanayo Nidaamka tuner.
Ku jawaab Nept1
Ku aad Pietro dijo
aad u qaldan saameynta xusuusta ayaa ku dhacda batteriga iyadoo ay ka kooban tahay kiimikada ka kooban batteriga nidaam adag oo sharxaya
Haa, laakiin baytariyada maanta ma haystaan ​​iskudhafyadii kiimikada ee hore.
Batariyada ay saameyntaan ku yeelatay waxay ahaayeen Nickel Cadmium (NiCd) ... laakiin hada waa Lithium Ion (Li-ion).
Ku jawaab Xergio
Waad tagaysaa dijo
markii aan iibsanayay lg optimus l9 waxay la timid lacagteeda warshada caadiga ah waan daaray oo waan istcimaalay ilaa ay ka hartay boqolkiiba 8 boqolkiiba, waxaan ku xeray si aan u soo xareeyo habeenki maalinta xigta 18 saacadood ka dib wali waxay muujineysaa inay ka maqan tahay lacag, waan ka jaray oo daaray markii aan hubiyay boqolkiiba culeyska ay igu tiri waa boqolkiiba 92% waan istcimaalay maalintaas ilaa aan uga tagey bilaa batari waana isku xirey mar labaad ayaan ka tagay habeenki xigay kusii waday isla dhibaatadaas oo kaliya Waxay gaaraysaa 92% culeyska, majiro wax horumar ah, ma culeysmayo 100%, yaa ii sharixi doona sida loo xaliyo arintan fadlan
Ku jawaab Vaas
Meesha aad ku iibsatay u qaado, waxaan u maleynayaa inay u baahan tahay inay ka gudubto dib u eegista ...
Ku jawaab Alfonso de Frutos
Sony Ericsson Xperia Ray (iyo II) Dib u eegis